Uthungelwano ishishini Isixhobo Umatshini CNC entsha strong ukujoyina Anyka Era ukumisa Internet - China Shandong New Ankai-Kitco
Wathi guququ Horizontal CNC Lathe Series
Nkqo Milling CNC Lathe Series
Uthungelwano ishishini Isixhobo Umatshini CNC entsha strong ukujoyina Anyka ukumisa Era Internet
Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo yorhwebo, ubuchwepheshe Internet iye ebhaliweyo ibonwe yokutshintsha lwehlabathi amavo mveliso kunye nobomi zoshishino. Ngophuhliso ngokukhawuleza i Internet namhlanje, "Internet dibanisa" iye yaba uphuhliso olutsha eqhelekileyo ishishini lemveliso. Umbuso ukhuthaza ezintsha, ndingu "Internet dibanisa", izise amathuba abalulekileyo kwishishini lokuvelisa. Ukuze baphumelele phulo ixesha Internet, entsha Shandong Ankai CNC Machine Tool Co. Ltd. (emva koku obizwa ngokuba "Ankai CNC omtsha") ukukhetha China network ishishini umatshini ilungu eliphezulu, yaye esomelela Web mall Intelligent, kunye nethemba ukuba inethiwekhi ishishini umatshini Chinese uncedo elungileyo luvuleleka kwimarike Internet.
Shandong Ankai CNC Machine Tool Co. Ltd. Shandong entsha Ankai iqela phantsi ingongoma eliphezulu isiqalo, amashishini eliphezulu-zobugcisa. Le nkampani njengeqela inkampani enkulu leyo ehlanganisa lemveliso ngomatshini, imoto die-eyahlulayo, ishishini aluminiyam, ishishini nelembande, ezemali, indawo neyokutya. Inkampani yethu izimisele usika CNC lathe yokugaya uyilo esimbaxa umatshini kunye nophuhliso, iimveliso kunye nemveliso. Le nkampani wafumana isethi epheleleyo inkampani Technology South Korea HJM, othini ekhoyo olunye, ulawulo ndzandzelelano axis ezintathu CNC lathe nkqo wekhaya complex iimveliso ezintathu jikelele machine series; nabo babe eliphezulu-grade Umatshini CNC lathe wokugaya esimbaxa yokuluka kabini, asixhenxe axis nedibanisa ezine, kangangoko ubuninzi ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi ezahlukeneyo. Ezi mveliso efanelekileyo ingakumbi xa kusingathwa nentaphane, ukuchaneka aphezulu izahlulo ezintsonkothileyo emotweni, elektroniki, unxibelelwano, ishishini IT, zonyango, emkhosini, eyama zekhompyutha, oomatshini kunye nezixhobo hydraulic shishino.
Okwangoku, kunye nophuhliso ngokukhawuleza i Internet namhlanje, isixhobo umatshini omtsha NC China Ankai ukhethe ukuba basebenzisane kunye nothungelwano ishishini ufuna ukusebenzisa amandla Internet, ukwandisa isabelo emarikeni. Ukhetho China CNC umatshini isixhobo Ankai network ishishini elitsha isekelwe kwi-website entsimini lweengcinga yesixhobo umatshini zobungcali onegunya. Lo nyaka ngunyaka wokuqala i-CNC kumatshini isixhobo Chinese Ankai intsebenziswano kunye noshishino womnatha entsha, unyaka inkxaso macala kunye nophuhliso eqhelekileyo.
Kwixesha elizayo, uDemasi Binna uya kuqhubeka kukulayinisha kumgca nokuqhubeka ukunika abasebenzisi iimveliso anelisayo kunye neenkonzo.
ixesha Post: May-02-2018
Idilesi: Fuhai Road, Han Dian Town, Zouping County, Shandong
Yintoni na ke ukugqithisela Swiss CNC machin ...
njani kwamanani walk yolawulo m encinane ...
I CNC yenethiwekhi ishishini isixhobo umatshini omtsha ...
Iimpawu ezintsha Ankai aqikelele
Lo matshini entsha SC385 SM203, Ankai Impumelelo ...